SMS Marketing na Uru Ya Dị zingtụnanya | Martech Zone
Ahịa SMS na Uru Ya Dị Amatụnanya
SMS (obere usoro ozi) bu okwu ozo ozi ederede. Na, imirikiti ndị azụmaahịa amaghị mana ide ozi ederede dịkwa oke mkpa n'ụzọ ndị ọzọ eji ere ahịa dịka mgbasa ozi mgbasa ozi ma ọ bụ ahịa site na iji broshuọ. Uru ndị metụtara ahịa SMS bụ ọrụ maka ịme ya otu nhọrọ kachasị mma maka ụdị azụmaahịa dị iche iche, ndị na-atụ anya iru ọtụtụ ndị ahịa.
A maara SMS ka ọnụọgụ oghe nke 98%.
Y’oburu na ibido ahia gi ma na i na enwe otutu nsogbu, o doro anya na igbasa ego bu otu n’ime ihe ndi kachasi mkpa ị nwere. Ikwesiri wepu ahia ọ bụla ị nwere ike ị na-edozi ahịa yana ahịa mmefu ego na usoro a. Ọ ga - abụ otu n'ime ahia aghụghọ kachasị njọ iji chọpụta nguzozi na ọ ga - esokwa ọtụtụ echiche ndị ọzọ, dịka oge ejiri, ihe ọmụma teknụzụ, yana otu esi egbu ya.
Ọ bụ ezi echiche iji rụọ ọrụ na ụlọ ọrụ azụmaahịa SMS iji duzie atụmatụ dị mma. Enwere ọtụtụ mgbakwunye agbakwunyere site na iji ozi ederede maka ụlọ ọrụ ọ bụla. Nyere n'okpuru bụ ndepụta nke uru dị ịtụnanya metụtara ahịa SMS.
Ahịa SMS na-abawanye Njikọ Ndị Ahịa
Enwere nnukwu nghọtahie na ejiri naanị ozi maka ichetara ndị ahịa banyere ihe maka izipu ego ma ọ bụ koodu ndepụta ego. Agbanyeghị, ịkwesịrị ịma na ozi SMS oge na-aga ịrụ ezigbo ọrụ nke itinye ndị ahịa ahụ n'ụzọ dị mma, ma e jiri ya tụnyere azụmaahịa mgbasa ozi mmekọrịta maka ịre ahịa email. Ikike inye ndị ahịa ọdịnaya dị ịtụnanya dịka mgbasa ọkọ, nhọrọ nke ahaziri, yana egwuregwu, ozi ederede, nwere ike ịme mmetụta ebumpụta ụwa.
Ha agaghi enyere aka na ibawanye nke itinye aka ma ha na enyere aka n'inwe mmuta ajuju ya na usoro nke okwu onu.
SMS pụrụ ịdabere
Are ga-eleda ya anya mgbe ị na-etinye ọtụtụ awa iji mepụta ezigbo email wee chọpụta na ọ na-aga ozugbo na igbe spam nke ndị ahịa. Ọbụna mgbe agbasoro omume kacha mma iji zere folda spam, enweghị ike ijide 100% deliverability. Ọ ga-esikwu ike mgbe a na-atụle azụmahịa na nkwukọrịta azụmahịa. Ulo oru, tinyere nnukwu ụlọ ọrụ, ga-enwe ọnụ ụzọ ntanetị nke ozi ịntanetị, yana nchekwa echekwara. Nke a bụ ihe kpatara ọrụ SMS otu ọwa kachasị mma maka iso ndị ahịa na-ekwurịta okwu.
Nyere n'okpuru bụ ndepụta nke aro ndị na-aga iji hụ na ozi ederede ga-eru ebe kwesịrị ekwesị.
Ejila akara ụda edemede ma ọ bụ mkpụrụedemede ukwu.
Gbaa mbọ hụ na ị na-ekewapụta ọdịnaya ahụ ma ọ bụ ndị ọzọ na - arụ ọrụ nwere ike igbochi ozi ndị a na - emegharị ọzọ.
Gbaa mbọ hụ na ị na-ezere okwu ndị na-akpasu iwe.
SMS nwere ọnụ ọgụgụ dị elu karịa Emails
Otu uru dị ukwuu metụtara ahịa SMS bụ na ndị ahịa ga-emepe ozi ozugbo ha natara ya. Nke a bụ ọrụ maka ịnye ozi ederede na ọnụego mepere emepe ka mma ma e jiri ya tụnyere nhọrọ mgbasa ozi ndị ọzọ. Ọ dị mfe maka ozi-e furu efu n'ụzọ dị mfe na folda spam.
Mana site n’ide ederede na-ewu ewu, ire ederede bụ ihe a na-agaghị eleghara anya. Ọtụtụ oge, onye ahịa ga-emepe otu ederede ma gụọ ọdịnaya ahụ. Ọ bụrụ n'ị na - achọ ụzọ ị ga - esi nweta ndị ahịa gị ugbu a na ndị ahịa nwere agbanwe agbanwe, ị ga - anwale ederede. Ka ewere mụtakwuo, ị nwere ike pịa ebe a.
SMS Marketing dị oke ọnụ
Ọ gaghị ewe ọtụtụ ego iji zipu ederede nye ndị ahịa. Ọ dị ọtụtụ ọnụ ala karịa iji ụzọ ndị ọzọ nke ịzụ ahịa dịka ịzụta mgbasa ozi Facebook. Nke a ga - eme ahịa SMS ka ọ bụrụ nhọrọ dị mma maka azụmaahịa ahụ, n'agbanyeghị ụdị ha. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ndị malitere ugbu a nwere ike iji ahịa SMS na-enweghị nnukwu ego na ụzọ ndị ọzọ nke ịzụ ahịa. Ọ ka mma mgbe e jiri ya tụnyere usoro ahịa ọdịnala.
Ahịa SMS na-ewepụta Nanị
Onye ntinye ederede ederede nyere gị ohere ịbanye na ụwa nke onwe ya, yana akara ekwentị, nke dị ike ma na-ebukwa ọtụtụ ibu ọrụ. Ọ bụ ọrụ dịrị gị iji hụ na ha nwere ikike dị ka oke na enweghị ike. Dika ahia mbu, ikwesiri igbanwe ma nwekwa nghota zuru oke banyere onye ahia obula ma nwekwa ikike imeputa ozi di nma maka ime ka ndi ahia bia.
Ahịa SMS na-agba ọsọ na More More Complex na Ọkaibe Ọkara
Ederede ederede adịghị eso ụzọ na-akpali akpali ma ọ bụ imewe ọnụ. Ikwesighi ikwusi otutu ego maka imeputa ihe olu. Ihe niile ị chọrọ bụ ojiji kwesịrị ekwesị nke okwu, nke nwere ike ịmepụta ọkwa maka ụdị ndị asọmpi niile yana mkpọsa. Site n'iji okwu ndị dị mma mee ihe, ị ga-enwe ike iwere mkpọsa ozi na ọkwa ọhụrụ.
Nsonaazụ Ahịa SMS dị ozugbo
A ederede ozi bụ maa ihe ozugbo ọwa na dị ka a ika, ị nwere ike hụ na ọbụna oké egwu ozi na-aga na-agụ fọrọ nke nta ozugbo. Nke a ga - enyere ndị ụdị aka ịdebe ozi, nke na - eche oge, dị ka azụmahịa oge ikpeazụ, nkwalite metụtara ihe omume, ire ahịa ọkụ, na ekele ezumike. SMS dị ka ngwa ngwa dị ka ọkụ na enweghị ihe ọ bụla dị ka ngwa ngwa ma e jiri ya tụnyere ozi ederede.
Ikwesiri igba mbọ hụ na ozi ederede dị nkenke ma doo anya. Gaa site na uru niile edepụtara n'elu iji hụ na ozi ederede bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke usoro azụmaahịa ị nwere.
Tags: koodu ozi nkpirisisms ozisms Atụmatụederede ederede ahiatexting
Barrack Diego bụ onye nwere ahụmahụ na-ede blọgụ nke dere ederede maka ọtụtụ blọọgụ ama ama na weebụsaịtị maka ọtụtụ ojiji nke mgbasa ozi mmekọrịta iji zụọ ahịa azụmaahịa na weebụsaịtị.